Izindaba - Ukuthi ubude obugxile kakhulu buyithinta kanjani imiphumela yokumodela ye-3D
Ingabe ubude obugxile buyithinta kanjani imiphumela yokumodela ye-3D
Ngokuthatha izithombe ze-oblique, kunezigcawu ezine okunzima kakhulu ukwakha amamodeli we-3D:
Indawo ekhanyayo engakhombisi imininingwane yokuthungwa kwangempela kwento.Isibonelo, ingaphezulu lamanzi, ingilazi, indawo enkulu yokwakha izakhiwo zokwakheka okukodwa.
Izinto ezihamba kancane. Isibonelo, izimoto ezimpambanweni zomgwaqo
Izigcawu lapho amaphuzu esici engakwazi ukufaniswa noma amaphuzu afanayo esici anamaphutha amakhulu, njengezihlahla nezihlahlana.
Izakhiwo eziyinkimbinkimbi eziyize. Njengama-guardrails, iziteshi ezisezingeni eliphansi, imibhoshongo, izintambo, njll.
Ezigcawini zohlobo 1 no-2, noma ngabe ulithuthukisa kanjani ikhwalithi yedatha yoqobo, imodeli ye-3D ngeke ithuthuke noma kunjalo.
Okwezigcawu zohlobo lwe-3 bese uthayipha u-4, ekusebenzeni kwangempela, ungathuthukisa ikhwalithi yemodeli ye-3D ngokwenza ngcono ukulungiswa, kepha kusalula kakhulu ukuba nama-void nezimbobo kumodeli, futhi ukusebenza kwayo kahle kuzoba phansi kakhulu.
Ngaphezu kwezigcawu ezikhethekile ezingenhla, kunqubo yokumodela ye-3D, esikunaka kakhulu yikhwalithi yemodeli ye-3D yezakhiwo. Ngenxa yezinkinga ezihlobene nemingcele yendiza yokusetha, izimo ezikhanyayo, imishini yokutholwa kwedatha, isoftware yokumodela ye-3D, njll., Kulula futhi ukwenza ukuthi isakhiwo sibonise: ukuphefumula, ukudweba, ukuncibilika, ukususwa, ukusonteka, ukunamathela, njll. .
Vele, izinkinga ezibalulwe ngenhla nazo zingathuthukiswa nge-3D model-modify. Kodwa-ke, uma ufuna ukwenza umsebenzi wokuguqula imodeli enkulu, izindleko zemali nesikhathi kuzoba kukhulu kakhulu.
Imodeli ye-3D ngaphambi kokuguqulwa
Imodeli ye-3D ngemuva kokuguqulwa
Njengomkhiqizi we-R & D wamakhamera we-oblique, uRainpoo ucabanga ngombono wokuqoqwa kwedatha:
Ungayakha kanjani i-oblique camera ukuze uthuthukise ngempumelelo ikhwalithi yemodeli ye-3D ngaphandle kokukhulisa ukuhlangana komzila wendiza noma inani lezithombe?
2, Buyini ubude obugxile
Ubude begusu lens ipharamitha ebaluleke kakhulu.Inquma usayizi wento kokuphakathi kwe-imaging, okulingana nesikali sento nesithombe. Uma usebenzisa ikhamera emile yedijithali (DSC), inzwa ikakhulu yi-CCD ne-CMOS. Lapho i-DSC isetshenziswa ocwaningweni lwasemoyeni, ubude obugxile bunquma ibanga lesampula lomhlabathi (GSD).
Lapho udubula into efanayo eqondiwe ebangeni elifanayo, sebenzisa ilensi enobude obude obude, isithombe sale nto sikhulu, futhi ilensi enobude obugqamile obufushane incane.
Ubude bokugxila bunquma usayizi wento emfanekisweni, i-engeli yokubuka, ukujula kwensimu kanye nombono wesithombe. Ngokuya ngesicelo, ubude bokugxila bungahluka kakhulu, busuka kumamilimitha ambalwa kuye kumamitha ambalwa. Ngokuvamile, ngokuthwebula izithombe zasemoyeni, sikhetha, sikhetha ubude obugxile ebangeni lama-20mm ~ 100mm.
3, Yini i-FOV
Ku-lens optical, i-engeli eyakhiwe iphuzu maphakathi lens njengesiqongo nobubanzi obukhulu besithombe sento esingadlula kulensi kuthiwa i-engeli yokubuka. Okukhudlwana i-FOV, kukhulisa ukukhulisa okubonakalayo. Ngokwemigomo, uma into eqondisiwe ingekho ngaphakathi kwe-FOV isibani esikhonjisiwe noma esikhishwe yinto ngeke singene kwi-lens futhi isithombe ngeke sakhiwe.
4, ubude be-Focal & FOV
Ngobude obugxile bekhamera ye-oblique, kunokungaqondani okuvamile okubili:
I-1) Uma ubude bude bude, kuphakama ukuphakama kwendiza kwama-drones, futhi kukhulu indawo isithombe esingayimboza;
2) Uma ubude bube bude, kukhulu indawo yokumboza futhi kuyanda kokusebenza kahle;
Isizathu sokungaqondani okubili okungenhla ukuthi ukuxhumana phakathi kobude obugxile ku-FOV akubonwa. Ukuxhumana phakathi kwalokhu kungukuthi: ubude obude bokubheka, i-FOV incane; uma kufushane ubude bokugxila, kukhulu i-FOV.
Ngakho-ke, lapho usayizi womzimba wohlaka, ukulungiswa kohlaka, nokulungiswa kwedatha kuyefana, ushintsho kubude obugxile luzoguqula kuphela ukuphakama kwendiza, futhi indawo embozwe isithombe ayishintshi.
5, ubude obugqamile nokusebenza kahle
Ngemuva kokuqonda ukuxhumana phakathi kobude obugxile ku-FOV, ungacabanga ukuthi ubude be-focal ubude abunamthelela ekusebenzeni kahle kwezindiza.I-Ortho-photogrammetry, ilungile uma kuqhathaniswa (uma kukhulunywa ngokuqinile, ubude be-focal bude, buya phezulu ukuphakama kwendiza, lapho idla amandla amaningi, kufushane isikhathi sendiza futhi kwehlise ukusebenza kahle).
Ngokuthwebula izithombe nge-oblique, uma ubude bube bude, kunciphisa ukusebenza kahle.
Ilensi ye-oblique yekhamera ivame ukubekwa nge-engela engu-45 °, ukuze kuqinisekiswe ukuthi idatha yesithombe se-facade enqenqemeni yendawo eqondiwe iyaqoqwa, umzila wendiza udinga ukwandiswa.
Ngoba ilensi iphoqelelwe ngo-45 °, kuzokwakhiwa unxantathu ongakwesokudla we-isosceles. Uma kucatshangelwa ukuthi isimo sendiza ye-drone ayicatshangelwa, i-axis enkulu ye-lens ye-oblique imane nje iyiswe emaphethelweni endawo yokulinganisa njengemfuneko yokuhlela umzila, bese kuthi umzila we-drone unwebe ibanga elilinganayo nokuphakama kwendiza ye-drone .
Ngakho-ke uma indawo yokumbozwa komzila ingashintshiwe, indawo yokusebenza yangempela yamalensi amafushane okugxila kukhulu kunaleli lens ende.
Ngaphambilini:Amaphoyinti wokulawula nedatha ye-PPK kuthinta kanjani ukunemba okuhlobene kwemodeli ye-3D
Olandelayo:Izinhlobo ze-GSD ne-carone carriers zithinta kanjani ukunemba okuhlobene kwemodeli ye-3D